Map-ka AutoCAD 3D waxay ku habboon tahay Linux-Geofumadas
Inkastoo AutoDesk ay ka tanaasuleen Linux, dhowr sano ka hor, sanadihii ugu danbeeyay waxa ay sameeyeen dadaallo ay ku soo celinayaan, sidaas daraadeed waxay dhawaan ku dhawaaqday in ay la socoto xiritaankan.
Nidaamka Sameeynta Codsiyada Cusub Citrix XenApp si fudud u oggolaanaya macaamiisha macaamiisha 3D inay abuuraan, leexiyaan oo maamulaan xalalka software-ka Geospatial ee Citrix Environment.
Autodesk iyo Citrix Systems, Inc. waxay wadaagaan hadafka ah in ay macaamiishooda siiyaan waxtarka iyo dabacsanaanta isticmaalka Autodesk geospatial applications. Qaybinta Macaamiisha AutoCAD® 3D adoo isticmaalaya Citrix XenApp ™ waxay u oggolaaneysaa macaamiisha inay kordhiyaan waxqabadka codsiga ayna yareeyaan kharashka si aad ah.
On madal Linux ah, xal Citrix Ready awoodaan in ay ogaato waxyaabaha in la jaanqaadaan codsiga Citrix ah, sidaas fududaynta geedi socodka doorashada software dadka isticmaala Citrix oo iyaga u ogolaanaya in ay helaan AutoCAD Map 3D. users Data AutoCAD Map 3D 2009 hadda deggan kartaa on server Citrix, heli ammaanka kordhay, kharashka hardware dhimay iyo soo laabashada korodhay on maalgashiga ilaa 30 boqolkiiba.
Horumarinta iyo maamulida codsiyada ee xaruntan xogta ayaa haatan hadda lagu maareynayaa codsiga Critrix, taas oo hoos u dhigeysa kharashka maamulka IT, kor u qaadaya macluumaadka ammaanka iyo hagaajinta sharciga waafaqsan. Intaa waxaa dheer, Citrix XenApp ayaa xitaa ugu baahsan Windows® codsiyada ugu awoodda badan ee nooc kasta oo ah qalab ama hawl-qabad shaqaynaysa iyada oo aan la bixin wax-qabadka ama shaqeynta.
Samaynta, injineero iyo maamulayaasha ka shaqeeya isgaadhsiinta, khayraadka dabiiciga ah, qaybaha dawladda iyo tamarta ay ku xiran tahay AutoCAD Map 3D in ay dadka dhexgalaan nidaamka xogta -CAD- computer dhameeya nidaamka design iyo macluumaadka juqraafiyeed inta lagu guda jiro -GIS- design iyo dayactirka mashruuca. Ururada inta badan loo soo dajiyo software ee degaanka on laptops iyo ka qaateen awood badan si ay u isticmaali karaan dadka isticmaala xafiiska. Si kastaba ha ahaatee, this hab dhaqanka baahsan u dhigi karaa shabakadaha WAN xiriir khayraadka sare (dib-dhamaadka), la abuuro arrimaha amniga iyo si weyn culays shaqaalaha IT ah, kuwaas oo laga yaabaa in ay u safraan xafiisyada fog fog si ay iyaga ku deymin taageero.
Qaybinta codsiyada filaayo, kordhiyay qiimaha AutoCAD Map 3D Citrix XenApp, caawinta macaamiisha si aan u weyneyno maalgashiga software AutoCAD Map 3D siyaabo kala duwan sida hagaajinta waxqabadkooda WAN, bixinta ilaalinta codsi dheeraad ah oo ku adag ama ammaanka weyn xogta iyo hantida aqooneed ee sidoo kale waxaa macquul ah ee server mideynaya iyo maamulka.
Wixii macluumaad dheeraad ah waad booqan kartaa:
Post Previous«Previous Barnaamijka GIS ee bilaash ah ee OSWC 2008
Post Next Geofumed, noloshayda gaarka ahNext »